Loolanka Naqshadeynta: 365 Astaamo asturaya macnaha | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Fanaaniin, logos
Daniel Carlmatz ayaa leh deji caqabadda abuuritaanka 365 logos taas oo sir ku haysa qaab qoraalka. Taabadalkeed, macno sida ku xusan astaamaha lafteeda si ay u noqoto astaan ​​aad u cajaa'ib badan oo hal abuur leh. Gaar ahaan qaar ka mid ah oo u taagan qaab soo jiidasho leh.
Carlmatz wuxuu u doortay ereyo taxane ah sii qaabka saxda ah ee xarfaha ama naftiisa u qariso macnahaas. Maaha inay adag tahay, in kastoo ay ku qoran tahay Ingiriis waxaa dhici karta inaan seegno macnaha qaar. In kasta oo ay jiraan xoogaa caqli badan oo ka tagaya raadadka aan ku soo jiidanno dareenkeenna.
Sida kan leh erayga "qaawan" kaas oo mid ka mid ah xarfaha gebi ahaanba faaruq yihiin, oo si dhammaystiran u metelaya macnaha astaanta. Ama erayga "panda" oo qaabka xuruufta xarfaha u bixisa naasleydaas gaarka ah.
Caqabada aadka u ah abuuro 365 astaamo kala duwan Wuxuu ka yimid fikradda ah inuu naftiisa ku xujeeyo inuu naqshado ka abuuro aragti kale. Sida haddii ay ahayd isla qolka shaqada ee fikradahaaga naqshadeynta la siiyo xorriyad guud oo ay ku muujiyaan naftooda.
Natiijooyinku waa kuwo naxdin leh shaki la'aan fudeydkeeda iyo hal-abuurkeeda. Wuxuu ku bilaabay ereyo uu horeyba u lahaa fikrad cad oo ah sida loo sameeyo astaanta si loo bilaabo in la ogaado in qaar kale ay ka dhib badan yihiin.
Isla erayga Panda ayaa qaatay waqti dheer, sida uu sheegayo. Qaar kale horey ayey u lahaayeen xalka marka hore, si uu isagu uun u helo kalmad taageerta xalkaas.
Waxaan kugula talineynaa inaad marto iyaga Instagram si loo helo dhammaan astaamaha iyo wixii la mid ah hel macnaha qarsoon mid kasta oo iyaga ka mid ah. Xaqiiqdii waxaad waqti fiican kuheli doontaa fikradaha nashqadeeyahan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Caqabadda 365 astaamaha nashqadeeyaha oo macno ku leh qaab qoriddooda
Abaalmarin David Bowie ah oo kaqeyb gasha dadka reer New York